पढेको कुरा कसरी याद गरि राख्ने ? यि तरीका अपनाउनुस - शैली न्युज
पढेको कुरा कसरी याद गरि राख्ने ? यि तरीका अपनाउनुस
१३ चैत्र २०७७, शुक्रबार १०:५८
काठमाडौं । के तपाईं लामो पढेको कुरा लामो समयसम्म सम्झिन चाहानुहुन्छ ? कल्पना गर्नुहोस् त ज्ञानगुनका धेरै कुराहरु मस्तिष्कमा टिपाउन एक दुई पटक पढेर धेरै समयसम्म सम्झिरहन सकेमा कति आनन्द हुन्थ्यो होला !
चाहे घरमा काम गर्ने गृहिणी होउन् वा कक्षा–कोठामा पढाउने शिक्षक, अथवा कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारी वा एक व्यापारी नै किन नहोउन्, सबैलाई आफ्नो स्मरणशक्ति बढाउने तीब्र इच्छा, अभिलाषा पक्कै हुन्छ ।
एमाले संसदीय दलको बैठकमा नेपाल–खनाल समूह जाने
१०० दिनमा २० करोडलाई खोप लगाउने बाइडनको लक्ष्य